संकटालाई हराउँदै सिक्किम युनाइटेड क्वार्टरफाइनलमा ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
संकटालाई हराउँदै सिक्किम युनाइटेड क्वार्टरफाइनलमा !
Posted by Milap Subedi | ८ बैशाख २०७५, शनिबार २१:१४ |
८ वैशाख, इलाम । सिक्किम युनाइटेड क्लब इलाममा जारी चौथो अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रण माईभ्याली गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
शनिबार इलामको टुँडिखेल खेलमैदानमा भएको खेलमा संकटा क्लब काठमाडौंलाई १–० को कठिन जित निकाल्दै पाहुना टिम सिक्किमले अन्तिम आठमा स्थान सुरक्षित गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा २२ औं मिनेटमा सिक्किमका सञ्जय क्षेत्रीले गोल गरी अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफमा विपक्षीलाई दबाबमा राख्न सफल सिक्किमको उत्कृष्ट प्रहार संकटाका गोलरक्षक विनय श्रेष्ठले बचाऊ गरेका थिए ।
दोश्रो हाफमा संकटा विपक्षीलाई दबाबमा राख्न सफल भयो । संकटाले दर्जन बढी अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो चरणबाटै बाहिरिन बाध्य बन्यो ।
खेलमा सिक्किमका गोलरक्षक उर्गेन पिनेसो शेर्पा म्यान अफ् द म्याच घोषित भएका छन् । उनले नगद १० हजार रुपैयाँ र चाँदीको मेडल प्राप्त गर्न सफल भए ।
सिक्किमले अब वैशाख १२ मा विभागीय टिम नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रतियोगिता अन्तरगत आइतबार दुर्गापुर स्टिल टीएसवाई क्लब भारत र विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
वैशाख १७ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र बंगलादेशका गरी १२ टोलीको सहभागिता रहेको छ ।
माईभ्याली फुटबल क्लबको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगिताका विजेताले नगद ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ र उपविजेताले ४ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।२०७१ सालमा सुरु भएको माईभ्याली गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता पुरस्कार र धनराशीका हिसाबले पूर्वी पहाडकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो ।
Previous“सारा पत्रपत्रिका ओलीविरुद्ध लेख्न डराइसके” : सभापति देउवा
Nextकांग्रेसको सदस्यता लिएर ‘उम्मेदवार मन परेको छैन’ भन्दै रुखमा भोट नहाल्नु गद्दारी : थापा
तयार भयो उड्ने कार, कसरी चल्छ ?
६ बैशाख २०७४, बुधबार १४:४२
भुषालको वडामा कांग्रेसको प्यानल विजयी ! खाँडको वडा एमालेको कब्जामा
२० असार २०७४, मंगलवार ०९:५६
पढाइ नेपालमा, प्रमाणपत्र भारतमा
२८ भाद्र २०७५, बिहीबार १४:२४
लण्डन ब्रिजमा पैदलयात्रीमाथि भ्यानबाट आक्रमण
२१ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०९:५३